Qurbe joogta Soomaalida oo xal u helay ubadkoodii - BBC News Somali
Qurbe joogta Soomaalida oo xal u helay ubadkoodii
29 Luulyo 2019
Waalidinta Soomaalida ee qurbaha ayaa ku buraarugey in ciyaaruhu ay yihiin wax yaabaha ay ilmahooda kaga bad baadin karaan in ay qaadaan wadiiqooyiinka qaldan ee halista gelin kara mustaqbalkooda carruurta.
Waayadii hore waalidiintu waxay aaminsanayeen in ilmaha iskuul lageeyo, isla markaasna dugsi Quraan loo diro maalmaha fasaxa ah oo gelin uu dhigto, iyadoo labadaasi ay waajib tahay , waalidiintu ayaa beryahan dambe qorshaha ku darsaday in ay ilmahooda ku daraan naadiyada ciyaaraha si ay wakhti u siiyaan ka mid ahaan shahooda.
Waxayna qayb waalidiinta ka mid ah qirayaan in naadiyadan iyo ciyaaruhuba ay waxbarashada qeyb weyn kaga jiraan.
''Wax yaabaha la xaqiijiyay oo baaritaan cilmiyeed lagu ogaaday waxaa ka mid ah ardayda hesha fursadaha ciyaaraha in ay ku wanagsanyihiin xaga kale ee waxbarashada oo tayada waxbarshada caruurta ay sportiga kor u soo qaadeyso sida hadey noqon lahayd xisaabta wax akhriska seyniska marka ma aha laba shey oo kala maarmi karaa.''
Waxaa sidaas BBC-da u sheegay , Siyaad Cali, oo xubin ka ah guddiga maamula waxbarashda magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
Hooyo Naciima Maxamed Cabdullahi ayaa qirtey in ciyaaruhu ay wax ka baddeleen wiilkeeda ''waxbarashadii iyo akhlaaqdiisa wax yaaba badan ayaa iska baddaley xawli ayuu ku sameeyaa layliligiisa, tan kale wax weyn ayaa iska baddaley, waayo markuu cunuggu ciyaaraha ku jiro iyo marka uu cunuga sports ciyaaraynin oo uu guriga iska fadhiyo waa kala duwan tahay marka nolosha ayaa u fur furmeyso marku cunuggu sportiga ciyaaro.''
Cabdul Maxamed oo ah aas aasaha naadigan kana mid ah tababarayaasha kubada cagta ayaa sheegay in yool kooda ugu weyni uu yahay in jiilka soo karaya sportiga ay ku xidhaan si ay u helaan waxbarasho sare oo bilaash ah .
"Dabcan dhalaanku ciyaarta wey jecel yihiin, waxbarshaduna inta ay yar yihiin ma oga hadafka loo geeyay, waalidiintuna waxay isugu xidheen tii u rebay iyo tii ay rebeen" ayay tidhi Naciimo.
Waalidiin badan ayaa xoogga saara sidii ay caruurtooda ugu najixi lahaayeen hadafka nolosha oo ah in ay arkaan caruur ku fiican dhinac walba, balse waxaa meesha ka maqan madadaalooyinka kale ee caruurtu ay u baahan tahay oo aysan helin, arrintaas ayaana keenta sida mararka qaar dhacda in hadii ay doortaan in ay ciyaaraan ay ciqaab la kulmaan.